“အုပ်ချုပ်ရေးအတွေ့ အကြုံ ကျွန်တော့်မှာ အများကြီးရှိတယ်”လို့ ကြွားဝါးခဲ့ဖူ့တဲ့ စစ်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ – Shwe Thadin
“အုပ်ချုပ်ရေးအတွေ့ အကြုံ ကျွန်တော့်မှာ အများကြီးရှိတယ်”လို့ ကြွားဝါးခဲ့ဖူ့တဲ့ စစ်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ
အတွေ့ အကြုံတွေ၊ အရာရှိငယ်ဒုဗိုလ်ဘဝက နေပြီးတော့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ရာထူးအထိ အဆင့်ပေါင်း များစွာ ခြေလျင်တပ်စုမှူးက စပြီးတော့ ကျွန်တော် Commander အဆင့်ဆင့် ကျွန်တော် လုပ်ခဲ့တယ်။စစ်ရေး အတွေ့အကြုံ ကျွန်တော့်မှာရှိတယ်။နောက်ဖြ တ်သန်းခဲ့ရတဲ့…
နိုင်ငံရေး အတွေ့ အကြုံ၊ စောစောကပြောတဲ့ ခေတ်တွေ ကျွန် တော်မှီတယ်။ ကျွန်တော်မြင်တယ်။ မြန်မာ့ဆိုရှ ယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ အထိ ကျွန်တော်မှီတယ်။တပ် မတော်အစိုးရနဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်း ခေတ်သုံး ခေတ်ကို ကျွန်တော် တပ်မတော်သားဘဝနဲ့ ဖြ တ် သန်းလာတာ”လို့ တပ်ချုပ်ကပြောပါတယ်။….
“နောက် အုပ်ချုပ်ရေးအတွေ့ အကြုံ ကျွန်တော့်မှာ အများကြီးရှိတယ်။တိုင်းမှူးလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်။နောက်ပြည်နယ် ဥက္ကဋ္ဌ လုပ်ခဲ့တာ ရှိတယ်။ ဒီအတွေ့အကြုံတွေက တပ်မတော် အတွက် ကော၊ တိုင်းပြည် အတွက်ကော၊ ပြည်သူ့အတွက်ကော၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အ ထောက်အကူရမယ့် ဟာလို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။….
ကျွန်တော်က တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၄ဝ ကျော်ကာလအတွင်းမှာ တိုင်းပြည်အတွက်၊ ပြည်သူအတွက်လုပ်ခဲ့တာ၊ ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ ဒီလိုပဲသွားမှာပါ” လို့ ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်ထဲ တပ် မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေကို ဘယ်အချိန်လောက်မှာ အနားယူသွားဖို့ရှိလဲလို့ သတင်းဌာနကအမေးကို….
တပ်ချုပ်က လ က် န က် ကို င် ပ ဋိ ပ က္ခတွေ ရှိနေတာကြောင့် လုံခြုံရေးအရ တည်ငြိမ်မှုမရှိသေးသလို ပါတီစုံစနစ်ကူးပြောင်းချိန်မှာလည်း နိုင်ငံရေးရင့်ကျက်မှုမရှိသေးတာကြောင့် တပ်မတော်က ဒါကိုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး တကယ်လို့ တည်ငြိမ်မှုတွေရှိသွားပြီဆိုရင်တော့ တပ်မတော်က သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်း
သွားဖို့ရှိတယ်လို့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။တပ်မတော်ကာ ကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ တပ်ချုပ်အဖြစ် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ အသက် ၆၀ ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး အဲဒီတုန်းက….
အငြိမ်းစားယူဖို့ အစီအစဉ်မရှိသေးကြောင်း အဲဒီနှစ်မေလကပြုလုပ်တဲ့ တပ်မတော်နဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေတွေ့ဆုံပွဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးကပြောကြားထားပါတယ်။အဲဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာပဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးနဲ့ ဒုတိယ ဗိုလ် ချုပ်မှူးကြီး စတဲ့ မြန်မာ စစ်တပ် ရဲ့ အကြီးအမှူး ရာထူး နေရာတွေက သူတွေ အငြိမ်းစား ပင်စင် ယူရမယ့်….
အသက် ကို အသက် ၆၅ နှစ် အထိ ၅နှစ် သက်တမ်းတိုးခဲ့တာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင် လှိုင်ဟာ ၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှာ သမ္မတလောင်းဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ပြည်တွင်းပြည်ပ နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တချို့ရဲ့ သုံးသပ်မှုတွေလည်း ရှိထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ တပ်ချုပ်ကိုယ်တိုင်ရောတိတိ ကျကျ ထုတ်ဖော်ပြောကြားတာမျိုး မရှိခဲ့ပါဘူး။…
KIA နှင့် PDF များကို စိုးရိမ်၍ စစ်ကောင်စီတပ်များ ကချင်ပြည်နယ်သို့ ရိက္ခာ၊ လက်နက်၊ စစ်သည်ပို့ရန် ကုန်တင်သဘော်များကို….
စစ်ဘေးရှောင်တွေကို ဘေးလွတ်ရာသို့ပို့ဆောင်ရင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ ဒုဗိုလ်ရှေးဖဲရဲ့ ဈာပန